Razer Gold PIN $5 USD (US) ~ ICT.com.mm
HomeRazer Gold PIN $5 USD (US)
Razer Gold PIN $5 USD (US)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Razer Gold is the unified virtual credit for gamers worldwide. Use Razer Gold in over 2,500 games and entertainment apps to purchase in-game items and unlock exclusive content. Get... [Learn more]
Razer Gold မှာ Razer Gold USA အကောင့်ဖွင့်ထားသူတွေအတွက် Mobile Legend, PUBG အပါအဝင် အခြားဂိမ်းပေါင်း 2,500 ကျော်နဲ့ BIGO Live လို Entertainment Apps တွေအတွင်းမှာ Game Items တွေနဲ့ အခြားသော Items အမျိုးမျိုးကို ဝယ်ယူဖို့အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Razer Gold USA PIN (USD 5$ တန်) ဖြစ်ပါတယ်။ gold.razer.com မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ Razer Silver အစီအစဉ်နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် ဂိမ်းအမျိုးအစားအလိုက် ဆုလက်ဆောင် Rewards တွေလည်း ရရှိဦးမှာပါ။
1. gold.razer.com သို့သွားရောက်ပြီး မိမိ၏ Razer Gold (USA) အကောင့်ကို Sign in ပြုလုပ်ဝင်ရောက်ပါ။